रेशम चौधरी र महेश बस्नेतको यो भेट ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचाररेशम चौधरी र महेश बस्नेतको यो भेट !
रेशम चौधरी र महेश बस्नेतको यो भेट !
काठमाडौं। नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले डिल्लीबजार कारा’गार पुगेर निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई भेटेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेका बेला बस्नेतले जसपा पार्टीका निलम्बित सांसद चौधरीलाई भेटेका हुन् ।